Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo u Hambalyeeyay Madaxweynaha Turkiga |
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo u Hambalyeeyay Madaxweynaha Turkiga
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed “Farmaajo” ayaa u hambalyeeyay Madaxweyne Erdoğan iyo Shacabka Turkiga kadib markii xisbiga madaxweyne Erdogan uu ku guuleystay aftidii laga qaaday shacabka dalkaasi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa khadka teleefoonka kula hadlay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale u sheegay dhiggiisa Mudane Erdoğan in natiijada aftidu ay sii xoojin doonto cilaaqaadka ka dhexeeya labada dal iyo iskaashiga labada dhinac.
Natiijada aftidii doorashada ee madaxweynaha Turkiga awoodaha cusub siinaysa waa sharci, sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga doorashada ee dalkaas.
Xisbiga madaxweyne Erdogan ayaa helay 51.37% halka garabka mucaaradkuna ay ka heleen boqolkiiba 48.63 guud ahaan codadkii la dhiibtay.
Madaxweynaha ayaa si toos ah u soo magacaabi doono wasiirada iyo saraakiisha sarsare.
Wuxuu sidoo kale magacaabi karaa madaxweyne ku xigeena dhowr ah.
Waxaa meesha laga saari doonaa xilka ra’iisalwasaaraha oo uu hadda hayo Binali Yildirim.
Madaxweynaha wuxuu awood u lahaan doonaa inuu faragelin ku sameeyo waaxda caddaaladda oo uu Erdogan horay ugu eedeeyay inay u janjeeraan dhinaca wadaadka Fetxullahi Gulen.
Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqi karo xaalad deg deg ah.